साहसी छोरी दाजुभाई नभएपनि छोरीहरुले गरे यस्तो कार्य - Muldhar Post
साहसी छोरी दाजुभाई नभएपनि छोरीहरुले गरे यस्तो कार्य
रासस २०७५, १८ पुष बुधबार 237 पटक हेरिएको
४ महिना अघि त्रिशुली नदीमा कार खसेर दुर्घटनामा मृत्यु भएका मधु सुवेदीको किरिया छोरीले चाहेर पनि गर्न पाएका थिएनन् । पोखरा ६ लेकसाइडका मधु सुवेदीको हिन्दु संस्कार अनुसार दाहसंस्कार गरिएको थियो । दाह्संस्कार गरिएको मधुलाई उनकै १६ बर्षिया छोरी ममता सुवेदीले दागबत्ति दिएकि थिइन।
पोखराका पर्यटन व्यवसायी मधु सुवेदीका छोरा थिएनन । उनका दुइ छोरि मात्र भएका कारण मधु सुबेदीले भन्ने गरेका थिए, मेरा यी दुई छोरीहरु छोरासरह हुन्, म मरेपछि यिनै छोरीले किरिया गरे हुन्छ । छोरीले पनि बाबुको यो इच्छालाई पुरा गर्न खोजेपनि समाजले दिएन। छोरा र छोरी दुबैलाई कानुनले बराबर हैसियत दिएपनि सामाजिक मान्यतामा यस्तो हुन सकेन ।
छोरा सरह आफ्ना बाबुको किरिया बस्न खोजे पनि मधुकी छोरी ममताले गर्न पाइनन । छोराले बस्न पाएपनि छोरीले काका र ठुलो बाबु हुदा यस अधिकार बाट बन्चित भएकी छिन। छोरीले चाहदा चाहदै पनि सामाजिक मान्यताकै कारण मधुको तेह्रदिने काजकिरिया काकाले गरेका थिए । काका हुदा हुदै छोरीले काजकिरिया गर्न नपाउने नेपाली सामाजिक मान्यता रहेको छ।
ममता किरिया बसे मधुको परिवारलाई बहिस्कार गर्ने चेतावनी दिएको मानाबधिकार कर्मी हरुले बताए। आफ्नो बाबुको बचन अनुसार नै आफुले किरिया बस्ने तयारी गरेपनि सामाजिक परम्पराले उनलाई रोक्यो। काका किरिया बसिरहँदा छोरासरह तेह्र दिने काजकिरिया बस्ने खोजेकि ममता लाइ सामाजिक मान्यताले बन्चित गरेको छ। कानुन ले छोरा छोरि समान भनेर सम्पूर्ण अधिकार दिइसकेको समयमा चलिआएको संस्कार भन्दै छोरीलाई किरिया बस्न नदिनु भनेको समाजले छोरीको अस्तित्व स्वीकार नगरेको मानबधिकारबादीहरू बताउछन।
छोरी जस्तै छोरी : चर्चित ब्याङ्कर अनिलकेशरी शाहकी एक मात्र छोरी छिन्― आर्यलक्ष्मी। पारिवारिक जमघट, पार्टी वा समारोहहरूमा कतिले “छोरी त छोरा जस्तै रै’छिन् नि” भन्दा उनको जवाफ हुने गर्छ, “मेरी छोरी, छोरी जस्तै छिन्, छोरा जस्तो होइन।” अर्थात्, उनका लागि सन्तानमा छोरा र छोरी समान हुन्छन्; र छोरा, छोरा जस्तै हुन्छ अनि छोरी, छोरी जस्तै।
छोराप्रतिको अतिशय चाहनाबाट विकास हुने छोरीप्रतिको अविश्वास बाबुआमाले उमेर छँदै बुढेसकालमा छोराछोरीमाथि निर्भर हुनु नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्दै जाने हो भने हराउने शाहको बुझाइ छ। उनको विचारमा, कदाचित सन्तानमा निर्भर हुनुपर्ने वृद्धावस्था आइलागेछ भने पनि छोराले हेर्छ र छोरीले हेर्दिन भन्ने हुँदैन।
नेपाली समाजमा बूढा बाबुआमालाई छोराले फालेका र छोरीले पालेका कैयन् उदाहरण भेटिन्छन् पनि। “जहाँसम्म छोरा नपाउँदा स्वर्गको बाटो बन्द हुने भनाइ छ”, शाह भन्छन्, “आफूले राम्रो गर्न सके यही पृथ्वी स्वर्ग हो, अज्ञात स्वर्गको के कुरा गर्नु!” सिईओ शाहले छोरीहरू जन्मिसकेपछि पनि एउटा छोरा त पाउनैपर्छ भन्ने लालसा राख्नेहरूलाई एक पटक सन्तान नहुनेहरूको पीडा बुझन पनि सल्लाह दिए।
छोरी भए लाख : एमाले नेता तथा पूर्वमन्त्री प्रदीप नेपाल पनि ब्याङ्कर शाह जस्तै छोरीलाई लाख ठान्ने बाबुहरूको पंक्तिमा छन्। एक्काइसौं शताब्दीमा पनि छोराकै चाहनामा पिरोलिंदै लुखुर–लुखुर हिंड्नुलाई पुरातन सोचको पराकाष्ठा मान्छन्, नेता नेपाल। एमबीबीएस सकेर एमडीको तयारी गरिरहेकी एक्लो सन्तान समीक्षाका बाबु नेपाल साढेदुई दशक लामो वैवाहिक जीवनमा आफूलाई कहिल्यै छोराको अभाव महसूस नभएको बताउँछन्।
प्रदीप नेपाल, श्रीमती झुमा देवान र छोरी समीक्षा : कठिन राजनीतिक संघर्षका बेला झुमा देवानसँग अन्तरजातीय विवाह गरेका नेता नेपालसँग एउटा छोरा जन्माउन साथीभाइले दिएका घुमाउरा सल्लाहहरूको भने थुप्रै सम्झ्ना छ। नेपाल भन्छन्, “खास गरेर साहित्यिक क्षेत्रका सङ्गातीहरूले दुईटा सन्तान त हुनैपर्छ भनेर जोड गर्थे।”
चिकित्सा पेशाबाट राजनीतिमा आएका कोइरालासँग अमेरिकामा डेन्टिस्ट्री पढिकी छोरी सुप्रियाले छोरा या छोरी भन्दा पनि सन्तानको भूमिका निर्वाह गरेको अनुभव छ। छोरा हुन् या छोरी, राम्रो शिक्षा र संस्कार दिनसके उनीहरू बाबुआमाको मात्र हैन समाज र देशकै भरोसा र भविष्य हुने उनी बताउँछन्। नेपाली राजनीतिमा ‘कोइराला परिवार’ नामबाट विख्यात घरानाको सदस्य उनले दोस्रो सन्तान वा छोरै पाउनुपर्छ भनेर कहिल्यै, कुनै दबाब खेप्नुपरेन। कोइराला दम्पतीले पहिलो सन्तानको रूपमा सुप्रिया जन्मेपछि नै थप सन्तान नजन्माउने सल्लाह गरिहाले।
काँग्रेस महामन्त्री डा. शशांक कोइराला दम्पती र छोरी सुप्रिया : छोरी वा छोरा जे भए पनि सन्तान हुनुलाई महत्वपूर्ण मान्ने डा. कोइराला आफ्नो स्वार्थका लागि धेरै सन्तान जन्माएर उनीहरूलाई समेत दुःख दिने अधिकार कुनै बाबुआमालाई नभएको बताउँछन्। छोरीको महत्व नबुझदा मानिसहरू छोरामोहमा पर्ने गरेको उनको बुझाइ छ। छोरा नपाउनेहरू मरेपछि स्वर्ग जान वैतरणी नदी पार गर्न सक्दैनन् भन्ने विश्वासलाई लक्ष्य गर्दै उनी भन्छन्, “बीपी जस्ता मान्छे त कहाँ जानुभयो कसैलाई थाहा छैन भने हामीले यसको चिन्ता लिएर धेरै सन्तान किन जन्माउने?” डा. कोइरालाको विचारमा, राजनीतिलगायत सार्वजनिक जीवन बिताउनेहरूले त झ्न् वैतरणीको चिन्ता लिनै हुँदैन।
चिमखोला–१ म्याग्दीकी थापाको विचारमा, मानिसहरूले बुढेसकालको तयारी आफैं गर्नुपर्छ। बुढेसकालमा श्रीमतीका लागि श्रीमान् र श्रीमान्का लागि श्रीमती नै पहिलो सहारा हुन्। सन्तान छैनन् वा भएर पनि अविवेकी छन् भने वृद्धवृद्धाको अन्तिम सहारा समाज र राज्य हुन्छ, यदि त्यो पनि विवेकहीन छैन भने। मृत्युले जोडीलाई विजोडी बनाएपछि बेसहारा हुने वृद्धवृद्धाका लागि छोरी पनि सहारा हुन्छन्, छोरै चाहिन्छ भन्ने छैन। बूढा बाबुआमाको हेरचाह छोराले भन्दा छोरीहरूले राम्रो गर्छन्, गरेका पनि छन्। उनी भन्छिन्, “तर, हामीकहाँ पढेलेखेकाहरूले समेत आफ्नै सन्तानप्रति ‘छोरा’ र ‘छोरी’ भनेर भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण बनाइरहेको दुःखद् अवस्था छ र अझ् कतिपय अवस्थामा त आमाले नै छोरीमाथि गर्व नगर्ने बिडम्वना समेत छ।”
शिक्षक मासिकका सम्पादक राजेन्द्र दाहाल र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत उषा दाहालले पनि पहिलो छोरी भएपछि अरू सन्तान जन्माएनन्। उनीहरूलाई ‘हैन, एउटा छोरा त हुनैपर्छ’ भन्ने कहिल्यै लागेन। छोरी युत्साप्रति दाहाल दम्पतीको अपार भरोसा र गर्व छ। वरिष्ठ पत्रकार दाहाल धर्मशास्त्रहरूले कतै छोरा नै जन्माउनुपर्छ नभनेको, तर मानिसहरूले बुढेसकालमा नरलोक र मृत्युपछि परलोक सुधार्ने भ्रममा छोरावाद स्थापित गरेको बताउँछन्।
पूर्व माओवादी नेता तथा पूर्व मन्त्री लोकेन्द्र विष्ट मगर नारीलाई कमजोर र परिवारको लज्जाको रूपमा लिने सामन्तवादी धारणाले छोरीलाई सन्तानको दर्जा नदिएको बताउँछन्। उनको बुझाइमा, यस्तो सामन्ती सोचले पढैया–धनीमानीदेखि निरक्षर–गरीबसम्मलाई समान रूपमा गाँजेको छ। मगरले पहिलो सन्तानका रूपमा छोरी सामना पाएपछि अर्को सन्तान नथप्ने निर्णय गर्नुमा नारीप्रतिको सामन्ती धारणासँग चर्को विमति नै प्रमुख कारण थियो। “सबै खालका विभेद अन्त्यका लागि २०५२ सालमा बन्दूक उठाएर हिंडेको मान्छे, छोरीलाई लैंगिक रूपमा अपूर्ण सन्तान मान्ने कुरै भएन”, मगर भन्छन्। ‘जनयुद्ध’ मा काँधमा काँध मिलाएर हिंडेकी श्रीमती गंगा बुढा मगरले पतिको विचारमा साथ नदिने कुरै आएन। मगर दम्पतीलाई सन्तान सुखका लागि एक छोरी नै काफी भयो।
ट्रेकिङ एजेन्सिज् एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) का सचिव रहिसकेका पर्यटन व्यवसायी गणेश न्यौपानेले पनि एक्ली छोरी सुजातालाई नै सहस्र माया दिने निर्णय गरे। कहिलेकाहीं साथीभाइले ‘सम्पत्ति खाने छोरो चाहिन्छ’ भन्ने आशयको कुरा गर्दा उनलाई हाँसो उठ्छ। त्यस्तो बेला ‘ल, छोरीको मुखले हाम्रो सम्पत्ति खान मिलेनछ भने भाइका छोराहरू छन्’ भन्ने जवाफ दिएर कुरा टुङ्ग्याइदिन्छन्, उनी। “यो सब पुरातन सामन्तवादी सोचको उपज हो”, न्यौपाने भन्छन्, “राजाको जेठो छोराले किरिया नबस्दा केही नहुने अनि ‘रैती’ को किरिया गर्न चाहिं छोरा नै चाहिन्छ भन्ने हावादारी तर्क चल्ने जमाना गइसक्यो।”
नेपाली समाजमा बुढेसकालको सहारा र मरेपछि वैतरणी तार्ने भनेर हुर्काइएका अनेकौं छोरा छन्, जसले बाबुआमालाई जीवनभर दुर्व्यवहार सिवाय केही गरेका छैनन्। बाबुआमाको किरिया बस्न पैसा दिएर खेताला खोज्नेहरूको पनि कमी छैन। नेपाली समाजमा ‘बाह्र छोरा तेह्र नाति बूढाको धोक्रो काँधैमाथि’ भन्ने उखान त्यसै चलेको हैन। अविवेकी छोराहरूले धेरै बाबुआमालाई पाटीको बास बनाएको पनि देखिएकै छ। भनाइ नै छ, ‘एउटा बाबुले १० छोरा पाल्न सक्छ तर दश छोराले एउटा बाबु पाल्न सक्दैन।’
वृद्धाश्रमहरूमा अपवादका रूपमा मात्र निःसन्तान र अविवाहित वृद्धवृद्धा फेला पर्छन्, धेरैजसो छोराले सम्पत्ति कब्जा गरेर सडकमा पुर्‍याएका बाबुआमा नै छन्। र पनि, हामीकहाँ छोराकै हाई–हाई छ। सडकमा फालिएका अरूका बाबुआमा समेत उठाएर स्याहार गरिरहेका छोरीहरूको भने खासै मूल्यांकन भएको छैन। भरसक परिवार नटुक्र्याउने मान्यता भएको नेपालमा प्राकृतिक रूपमै बढी संवेदनशील छोरीलाई विभेदको चस्माले नहेरी हुर्काउने हो भने बाबुआमाको भविष्य बढी सुरक्षित हुन्छ। केही हिमाल खबर डटकमबाट थप गरिएको छ ।